Chili Piper: Waa jadwal jadwal otomaatig ah oo loogu talagalay Is-beddelka Macdanta Soo-gala Martech Zone
Waxaan isku dayayaa inaan ku siiyo lacagtayda - maxaad aad ugu adkeysay?
Tani waa dareen caadi ah inta badan iibsadayaasha B2B. Waa 2020 - maxaan wali ugu lumineynaa iibsadayaasheenna (iyo kuweenna) waqtiyada hawlo badan oo qadiimi ah?
Shirarku waa inay ku qaataan ilbiriqsiyo si loo ballansado, maahan maalmo.
Dhacdooyinka waa inay ahaadaan wadahadal macno leh, oo aan ahayn madax xanuun.
E-maylku waa in looga jawaabo daqiiqado gudahood, oo aan lumin sanduuqaaga.
Is dhexgal kasta oo ku saabsan safarka iibsadaha waa inuu noqdaa mid aan muran lahayn.
Laakiin ma ahan.
Chili Piper wuxuu kujiraa hadaf ah inuu sameeyo wax iibsasho (iyo iibin) xanuun badan. Waxaan fiirineynaa inaan dib u cusbooneysiino nidaamyada waxqabadka ee ay adeegsadaan kooxaha dakhliyada - si otomaatig u ahaado wax kasta oo aad neceb tahay oo ku saabsan shirarka, dhacdooyinka, iyo emaylka - sidaas darteed waxaad waqti badan ku qaadan kartaa ficil.
Natiijadu waa wax soo saar badan, sicir baddal badan, iyo heshiisyo badan oo xiran.
Waxaan hadda haysannaa saddex xariiq oo wax soo saar ah:
Kulamada Chili waxay siisaa warshadaha sida ugu dhaqsaha badan, xalka ugu dhameystiran ee si toos ah jadwalka iyo hagida shirarka marxalad kasta oo ka mid ah wareegga nolosha macaamiisha.
Dhacdada 1aad: Jadwal lagu sameeyo hoggaannada soo gala
dhibaatada: Marka himiladu ka codsato demo boggaaga waxay horeyba u yihiin 60% iyada oo loo marayo habka iibsiga waxayna diyaar u yihiin inay yeeshaan wadahadal xog-warran. Laakiin celceliska waqtiga jawaabta waa 48 saacadood. Waqtigaas kadib rajadaadu waxay u gudubtay qofka kula tartamaya ama waad ilawday gebi ahaanba dhibaatadooda. Taasi waa sababta 60% codsiyada kulanka soo galaya waligood aan loo jarin.
Solution: Concierge - waa qalab jadwalka soo gala oo ku jira Kulamada Chili. Concierge waa jadwal qorsheeye oo khadka tooska ah oo si fudud ugu dhex milma foomkaaga shabakadda ee hadda jira. Marka foomka la gudbiyo, Concierge wuxuu uqalmaa hogaaminta, wuxuu usocdaa saxanka iibka saxda ah, wuxuuna soo bandhigayaa jadwal iskiis ah oo iskiis ah oo loogu talagalay rajadaada inaad waqti qabsato - dhammaantood ilbiriqsiyo gudahood.
Dhacdada 2aad: Jadwalka shaqsiyeed ee emaylka
dhibaatada: Jadwalka kulan ku saabsan emaylka ayaa ah geedi socod jahwareer leh, qaadashada emayllo badan oo horay iyo gadaalba ah si loo xaqiijiyo waqtiga. Ku darida dad badan isla'egta waxay kadhigeysaa wax aan macquul aheyn. Marka ugufiican, maalmo ayey qaadataa in waqti la qabsado. Markii ugu xumeyd, qofka aad ku casuuntay wuu quustaa oo kulanku weligiis ma dhaco.
Solution: Buugga Degdega ah - shirar badan oo dad badani isugu yimaadaan, oo lagu xareeyay emayl hal guji. Buugga degdegga ah waa kordhinta jadwalka khadka tooska ah (laga heli karo G Suite iyo Muuqaalka) ee dib-u-celinta loo adeegsado in lagu ballansado shirarka si deg deg ah emayl ahaan. Haddii aad u baahan tahay inaad isku dubarido kulan, kaliya soo qaado xoogaa yar oo ah waqtiyada kulanka oo la heli karo oo emayl ugu dir hal ama dad badan. Qofka qaata wuxuu riixi karaa mid ka mid ah waqtiyada la soo jeediyay qof walbana wuu jaaleyaa. Hal-riix waana intaas.
Dhacdada 3aad: Jadwalka wicitaannada gacanta ee hoggaanka
dhibaatada: Jadwalka gacan-siinta (aka. Wareejinta, u qalmida, iwm.) Kulamadu waa geedi socod hore iyo dib u socod ah. Barta gacan ku haynta caadiga ah ee u dhexeysa SDR iyo AE (ama AE ilaa CSM) waa kulan ballansan. Laakiin xeerarka qaybinta macdanta ayaa ka dhigaysa mid caqabad ku ah reps-ka si loo shiro shirarka si dhakhso ah waxayna u baahan yihiin xaashiyaha gacanta. Tani waxay keentaa dib u dhac iyo wax-tus la'aan, laakiin sidoo kale waxay ku sii kordhineysaa halista qaybsi aan cadaalad ahayn, arrimaha waxqabadka, iyo niyad xumo.
Solution: Buugga degdegga ah - shirarka buug-gacmeedka buugga meel kasta ilbiriqsiyo gudahood. Kordhintayada 'Instant Booker' waxay la midoobayaan Salesforce, Gmail, Outlook, Salesloft, iyo inbadan, sidaa darteed reps-ku waxay ballansan karaan shirarka meelkasta ilbiriqsiyo gudahood Leads ayaa si otomaatig ah loogu wareejiyaa milkiilaha saxda ah sidaas darteed wakiillada ayaa ballansan kara shirarka waraaqaha ah ee jadwalka saxda ah, mar kasta, iyada oo aan loo baahnayn in lagu baaro waraaqo.
Codso Dembire Chili Piper
Iyada oo Dhacdooyinka Chili, way u fududahay suuqleyda dhacdooyinka in ay hubiyaan in ballanqaadyo shirar ka hor dhac aan xaddidneyn loogu talagalay iibka iibka, ku-xirnaanshaha saxda ah iyo iswada ee fursadaha laga soo saaray dhacdooyinkaas gaarka ah, iyo maamul la'aanta goobta joogitaanka ee jadwalka labaad ee ugu dambeeya iyo helitaanka qolka.
Muuqaalka 1aad: Kulamada Dhacdooyinka Hore ee Buugga
dhibaatada: U horseedaya dhacdo, inta badan iibka iibku waxay u baahan yihiin inay gacanta ku qabsadaan kulamadooda. Tani macnaheedu waa emayl horay iyo gadaalba leh oo leh rajooyin iskudayaya isku dubbaridka jadwalka taariikhda iyo qolalka shirarka. Guud ahaan, tani waxay u abuureysaa madax xanuun iyo jahwareer wakiilka, macaamilka, iyo maareeyaha dhacdada - ciyaaryahan muhiim ah oo u baahan inuu maareeyo awoodda qolka kulanka oo uu ogaado waxa shirarka dhacaya, goorta Nidaamkan oo dhan sida caadiga ah waxaa lagu maareeyaa warqad-xisaabeed.
Solution: Dhacdooyinka Chili, mid kasta oo ka mid ah wakiiladu waxay leeyihiin isku xiraha jaale gaar ah oo ay la wadaagi karaan rajooyinka ka hor dhacdada - samaynta jadwalka iyo isku dubaridka qolka hal-guji. Kulamada ballansan ayaa sidoo kale lagu daraa Jadwalka Hubinta-Jadwalka - jadwalka dhexe ee maareeyayaasha dhacdooyinka ay u adeegsadaan inay la socdaan kulan kasta oo ka dhacaya dabaqa munaasabadda.
Muuqaalka 2: Ka Warbixinta Dhacdada Ka Warbixinta iyo ROI
dhibaatada: Maareeyayaasha Dhacdooyinka (sidoo kale Calaamadaha Dhacdooyinka) waxay la halgamayaan la socoshada shirarka dhacdooyinka ee Salesforce iyo caddeynta dhacdada ROI. Lasocodka kulan kasta oo ka socda shirku waa hanaan aad u fara badan oo loogu talagalay maareeyayaasha dhacdooyinka. Waxay u baahan yihiin inay ceyrsadaan wakiilada iibka, maareynta jadwal dhowr ah, iyo inay la socdaan wax kasta oo ku yaal xaashiyaha. Waxa kale oo jira hababka gacanta ee ku darista kulan kasta ololaha munaasabadda ee Salesforce oo waqti qaadata. Laakiin dhammaantood waa lagama maarmaan si loo caddeeyo ROI.
Solution: Dhacdooyinka Chili waxay si aan kala go 'lahayn ula midoobaan Salesforce, sidaa darteed kulan kasta oo la ballansaday si otomaatig ah ayaa loola socdaa ololaha dhacdada. Jadwalkayaga Jeeg-ka ayaa sidoo kale u fududeynaya maareeyayaasha dhacdooyinka inay la socdaan wax-soo-saar iyo inay cusbooneysiiyaan xaadiritaanka kulanka ee Salesforce. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u fudud in laga warbixiyo dhacdada ROI oo ay diiradda saaraan socodsiinta dhacdo weyn.
Chili Inbox (oo hadda ku jira beta gaar ah)
Kooxaha dakhliga ee adeegsada emaylka si ay ula xiriiraan rajooyinka iyo macaamiisha, Chili Piper Inbox waxay siisaa hab fudud, hufan, iyo iskudhaf ah oo ay kooxuhu ku wada shaqeyn karaan iyagoo iskaashi dheeraad ah la yeelanaya, aragti u yeelanaya xogta macaamiisha, iyo bixinta khibrad macmiil oo aan khilaaf lahayn
Dhacdada 1aad: Iskaashiga gudaha ee ku aaddan emaylka
dhibaatada: E-mayllada gudaha waa fowdo, wareer, oo ay adag tahay in la maareeyo. E-maylku way lumaan, waa inaad kala sifeeysaa boqolaal CCs / Forward ah, oo waxaad ku dambaynaysaa inaad kagala hadasho qadka ama ku sheekaysiga halkaasoo aan wax macno ahi ku jirin oo aan waxba laga diiwaangelin.
Solution: Faallooyinka Inbox - waa qaab emayl iskaashi ku dhex jira Sanduuqa Chili. Si la mid ah sida aad uga wada shaqeyso Google Docs, Muuqaalkayaga Faallooyinka Inbox wuxuu kuu oggolaanayaa inaad muujiso qoraalka oo aad la bilowdo wadahadalka xubnaha kooxdaada sanduuqaaga dhexdiisa. Tani waxay fududeyneysaa in loo wareejiyo xubnaha kooxda jawaab celin, caawimaad, oggolaansho, tababarid, iyo inbadan.
Muuqaalka 2aad: Raadinta fikradaha koontada
dhibaatada: Si dhab loo ogaado waxa ku dhacay koontada kahor intaadan dhaxlin waxay qaadaneysaa saacado shaqo adag oo lagu raadinayo howlaha Salesforce, dib u eegista howlaha kujira Qalabka Hawlgelinta Iibka, ama shaandheynta loo maro CCs / Forward sanduuqaaga.
Solution: Sirdoonka Xisaabtanka - muuqaalka sirta emaylka ee gudaha Chili Inbox. Iyada oo leh Chili Inbox, waxaad marin ugu heli kartaa taariikhda emaylka ee kooxda oo dhan koonto kasta. Muuqaalkayaga Sirdoonka Xisaabku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si dhakhso leh ugu hesho emayl kasta oo isweydaarsi leh koonto gaar ah, dhammaantood gudaha sanduuqaaga. Tani waxay fududeyneysaa in lala xiriiro emayl kasta oo la socda macnaha guud ee aad u baahan tahay.
Ku saabsan Maxjarka Piper
La aasaasay 2016, Chili Piper wuxuu ku socdaa himilo ah inuu sameeyo shirar isla markaana u soo diro emayl si otomaatig ah oo iskaashi leh ganacsiyada.
Chili Piper wuxuu diiradda saarayaa otomatiga geedi socodka qadiimiga ah ee jadwalka iyo emaylka oo sababa khilaaf aan loo baahnayn iyo hoos u dhac ku yimaada habka iibka - taasoo keentay wax soo saar kordhay iyo heerar beddelaad ah inta lagu jiro mashiinka.
Si ka duwan habka dhaqameed ee maareynta hoggaanka soo galaya, Chili Piper wuxuu adeegsadaa xeerar caqli badan si uu ugu qalmo loona qaybiyo tilmaamaha saxda ah ee waqtiga dhabta ah. Barnaamijkooda sidoo kale wuxuu shirkadaha u oggolaanayaa inay otomaatig ka dhigaan hoggaanka hoggaanka SDR illaa AE iyo inay shirarka ka qabtaan ololeyaasha suuqgeynta iyo dhacdooyinka tooska ah. Iyada oo boggooda soo socota lagu dejiyay emaylka, Chili Piper ayaa dhawaan ku dhawaaqay Chili Inbox, oo ah sanduuqa iskaashiga ee kooxaha dakhliga.
Shirkadaha sida Square, Twilio, QuickBooks Intuit, Spotify, iyo Forrester waxay isticmaalaan Chili Piper si ay ugu abuuraan khibrad layaableh hogaamiyayaashooda, badalkeedana waxay u badalaan labalaab inta ay ku jiraan hogaaminta kulamada la qabtay.
Tags: kulamada buugaagtadhacdooyinka chilisanduuqa sanduuqashirarka chilibasbaaskaotomatiga emaylkaG Suiteguskajadwalka hogaanka soo galayajadwalka soo galawareejinta hogaankakulanka wadada
Tusaalooyinka Bixitaanka Ujeeddada Soo-Been-Ururka Kaas oo hagaajin doona Heerarka beddelkaada